Times Of Nepali » अनौठो संसार
“म संग एक रात सु’त्नुहोस तपाइको ‘गुन’ तिर्न अरु छैन” “आजको प्रस्तुति यो एउटा कथा नभएर काठमाडौँका धेरै ठाउँहरुका हकिकत कथा पनि हो। हामी काठमाडौँमा रातीमा डुलेका छैनौ भने सायद ग्यान नै छैन होला। कतै बाध्यताले मान्छे रातारात बिग्री रहेका छन् त कतै रहरले बिग्री रहेका छन्। आजको यो कथा बरिस्ठ पत्रकार यबं साहित्यकार.....
काठमाडौं। फोटो पत्रकार क्लबको आयोजना तथा नेपाल पर्यटन बोर्डको सहकार्यमा भएको आइएमई–ग्लोबल–आइएमई बैंक नेपाल फोटो प्रतियोगिता २०७६ को उपाधि नभेष चित्रकारले जितेका छन् । चित्रकारले खिचेको हाइड्रोसेफालुस रोगका कारण ज्या’न गुमाएका रौतहट बरियारपुरका दुई वर्षीय बजरंगी मिश्रले आफ्नी आमालाई मृ`त्युअघि.....
बेलायतको समुद्रमा फसेका नेपालीको फिल्मी शैलीमा उद्धार, / हेर्नुहोस
काठमाडौं। बेलायतमा समुद्रको छालमा फसेका एक नेपालीको समुद्र किनार घुम्न गएका पर्यटकहरुले निकै कठिन परिश्रम गरेर उद्धार गरेका छन् । उनको उद्धारको कथा कुनै फिल्मको भन्दा कम छैन । इङल्याण्डको जुरासिक कोस्टमा रहेको डर्डल डोरमा एक नेपाली समुद्रको छालमा फसेका थिए । उनलाई त्यहाँ समुद्र किनारमा रमाइलो गर्न.....
यी युबतीलाइ बिहे पनि गर्नुस ३ करोड ५० लाख पनि लैजानुस, पूरा हे’र्नुहोस
यी युबतीलाइ बिहे पनि गर्नुस ३ करोड ५० लाख पनि लैजानुस, पूरा हे’र्नुहोस कुनै पनि बुबा आमा आफ्नो सन्तानको बिवाह भन्ने बित्तिकै उत्साहित नहुने त कुरै भएन् । बुवा आमाको सपना नै हुन्छ । आफ्नो छोरीहरुलाई राम्रो लाएकको केटा संग बिवाह गरिदिने । अनि उनिहरुको विवाहमा आफ्नो गक्षले दा’ईजो दिने । यस्तैमा आज हामी तपाईहरुलाई.....
एजेन्सी। धेरैजसो साना बच्चाहरु दिनमा मज्जाले सुत्दछन् तर रातमा भने रोइ बस्दछन् । बच्चाको यस्तो बानीले आमाहरु भने निकै हैरान हुन्छन् र रातभर जाग्राम बस्न बाध्य हुन्छन् । आखिर धेरै बच्चाहरु किन रातमा धेरै रुन्छन् त ? यसमा विशेष कारण छन् । विज्ञहरुका अनुसार बच्चाहरु जन्मिएर यो दुनियामा आएपछि नै हरेक दिन नयाँ.....
भिडियो / संसदमा बोल्दै गर्दा प्रधानमन्त्रीलाई अप्ठ्यारो भएपछि
काठमाडौं / प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा उभिएर बोल्न अप्ठ्यारो भएपछि सभामुखसँग बसेर बोल्न अनुमति मागेका छन्। नीति तथा कार्यक्रममा उठेका प्रश्नको संसदमा जवाफ दिइरहेका प्रधानमन्त्रीले स्वास्थ्यका कारण उभिएर बोल्न अप्ठ्यारो भएको भन्दै सभामुख अग्नी सापकोटासँग बसेर बोल्न अनुमति मागेका थिए। त्यस.....
कोरोनाबाट आमा गुमाएका शिशुमा देखिएन कोरोना तर आयो यस्तो ग’म्भिर रि’पोर्ट
काठमान्डौ , कोरोनाभाइरसका कारण मृत्यु भएकी सिन्धुपाल्चोककी महिलाका १३ दिने शिशुसहित परिवारका चार जना सदस्यको कोरोना नेगेटिभ देखिएको छ। धुलिखेल अस्पतालमा गरिएको पिसिआर परीक्षणमा सबैको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको अस्पतालका प्रवक्ता डा. सुमनराज ताम्राकारले जानकारी दिए। २९ वर्षीय ती सुत्केरी महिलाको मृत्युपछि.....
काठमाडौं–पछिल्लो समय सूर्यको ताप घट्दै गएको छ। यस्तो भए चिसो बढ्ने, भूकम्प र भोकमरी आउन सक्ने वैज्ञानिकहरूले बताएका छन्। घाम अहिले ‘सोलार मिनिमम’ को अवधिमा छ। अर्थात् घामको सतहमा हुने गतिविधि नाटकीय रूपमा घटेको छ। सूर्यको सतहमा देखिने ‘सनस्पट’ हराउँदै गएको छ। सूर्यको सतहमा कालो दागजस्ता अस्थायी रूपमा.....
कहिलेकाहीँ त्यता साँघुरो भए सुत्न मेरोतिर आए पनि हुन्छ नि भाइ । कुनै अप्ठेरो मान्नुपर्दैन, आफ्नै सम्झे हुन्छ,’ म डेरा सरेको तीन दिनपछि डेरावाल दिदीले भनेकी थिइन् । दिदीको त्यो भनाइ वास्तवमै सहज थिएन, उनले मलाई किन त्यसो भनिन् ? तीन-चार दिनसम्म मलाई सोचमग्न बनाएको थियो । म बस्ने माथिल्लो तलामा दिदीको कोठा.....
दुइ समाचार बाचिकाले स्त’न नै देखाएर समाचार वाचन गरेपछि (भिडीयोसहित)
दुइ महिला समाचार बाचिकाले व’क्षस्थल देखाएर समाचार बाचन गरेको भिडियो चर्चामा छ । सामाजिक संजालमा ट’पलेस लुगामा समाचार पढदै गरेको भिडीयो भाईरल नै बनेको छ । यो भिडीयोमा उनिहरूलेले शरिरको माथिल्लो भागमा कोट मात्रै लगाएर भित्री वस्त्र नलगाएको देखिन्छ । अहिलेको कोरो’ना सं*कटको समयमा अल्बानियामा मानिसहरु.....